Abavelisi abavelisi beDluli | Yongeza
Isilayidi sedrafti sinefenitshala esifanelekileyo esiyithandayo ekuvulekeni okuthambileyo okanye ukuvala idrowa. Udidi lwe-Adjuthu lwesilayidi quka lonke uhlobo lwe-scheol ye-Spider kunye ne-Slides ethambileyo, isilayidi sebhokisi ethambileyo, i-FRGV Slide Slides, i-FGV ye-Slide Slides, sinobutyebi bemveliso yokutyibilika Ngokuqinisekileyo sinokufumana into oyifunayo.
I-Addith Csala iSilayidi senziwe ngentsimbi eqengqelekayo yentsimbi eqengqelekayo, i-craft ye-craft ye-craft enganyangekiyo ekutsaleni kwaye ingabinakho ngokulula.
Ukufaka isicelo seZinto zokuba Izinto Ezinyibilikayo se-Drawer Slide kwaye sisebenzisa uyilo lwesampulu, i-crafti ye-crafti ukwenza umkhondo wangaphandle kunye neziqendu zangaphakathi zomelele. Ngokuhlolisiswa ngokusemgangathweni ngokungqongqo, kunokutsalwa ngokulula ngaphezulu kwama-50 000.Umntu odanileyo usenza ukuba kube nzima ukutyhala xa utsala idrowa. Singanikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha imibala, kwaye ubukhulu beento ezahlukeneyo zinokubonelelwa ukuba zifezekise iimfuno zabathengi kumanqanaba ahlukeneyo. Isicelo sendawo-sithuba esihlukeneyo, silungele ukusetyenziswa kweedreyiswa ezinzima kakhulu ezinje ngeewadi, iincwadana, iitafile zebhedi, iidesika zekhompyuter, njl.